Xusuusin muhiim ah oo ku socota qoysaska dhammaan | Updates
Xusuusin muhiim ah oo ku socota qoysaska dhammaan
Waaldiinta/Daryeeleyaasha Qaaliga ah: Waxaan u soo qorayaa xusuusin muhiim ah oo ku saabsan:
Qaabka waxbarashada oo loo bedelayo xanaanada hore ilaa fasalka 5aad (marka laga reebo DLA)
Qaabka waxbarashada durugsan ee ardayda dugsiyada sare oo sii socon doona
Sida lagu heli karo cunto lacag la’aan ah
Xanaanada hore ilaa fasalka 5: u wareegidda taabo talaabada ah ee waxbarashada tooska
Jan. 13-15: Xanaanada hore ilaa fasalka 5
Iskuul uma jiro Xanaanada hore ilaa fasalka 5 (marka laga reebo DLA, taas oo sidii caadiga ahayd u socon doonta). Shaqaaluhu waxay u isticmaali doonaan waqtigan si ay ugu diyaar garoobaan ku soo laabashada ardayda ee iskuulada.
Jan. 18: Maalinta La Xuska Maartiin Luder King (Dugsi Ma Jiro)
Jan. 19: Xanaanada hore ilaa fasalka 2
Ardayda xanaanada hore waxay ka qaybgeli doonaan waxbarashada fasalada iyagoo raacaya jadwalkooda.
Ardayda ku jira xanaanada ilaa fasalka 2 ( oo ay ku jiraan ardayda lacag la’aanta ee maalinwalba, barnaamijka xanaanada hore ee maalin-badhkeed) waxay ku soo laabanayaan iskuulka si buuxda (5 maalmood/usbuuciiba).
Basaskuna dib ayey u bilaabmi doonaan. Xanaanada iskuulka kahor iyo kadib ee Kidstop dib ayuu isna u bilaabmi doonaa.
Feb. 1: Fasalada 3-5
Ardayda ku jira fasalada 3-5 waxay ku laaban doonaan iskuulka si buuxda (5 maalmood/usbuuciiba).
Ardada dugsiyada sare: Waxay ku sii jiri waxbarashada durugsan ilaa amar dambe (Jan. 18: Maalinta La Xuska Maartiin Luder King (Dugsi Ma Jiro)
Xiligan, gobolku waxba kama bedelin go’aankoodii qaabka waxbarashada ee khuseeyey ardayda dugsiyada sare.
Waaxda caafimaadka Minnesota waxay go’aamisay in ardayda waaweyn ay leeyihiin khatar ka badan kuwa yaryar, sidaa daraadeed iskuuladu waa inay weli raacaan shuruudaha gobolka ee hore loo qeexay marka ay go’aaminayaan qaababka waxbarasho iyo go’aamada lagu kala bedelayo. Tixgelimahaas waxaa ku jira dhaqdhaqaaqa fayraska bulshada dhexdeeda (oo ay ku jirto dib u eegista xogta kiisaska degmada, xogta kiisaska magaalada, tirada kiisaska la xaqiijiyey, karantiinka, iyo isu dhowaansha bulshada iskuuladeena iyo iskuulada degmada dhexdeeda ah), iyo xogaha kale sida shaqsiyaadka leh xanuuno u eg kuwa hargabka.
Maamuleyaasha degmadu waxay sii wadi doonaan la xiriiraan oo wada tashi la sameeyaan waaxda waxbarashada MN, Waaxda caafimaadka MN iyo waaxda caafimaadka ee degmada Hennepin si ay u go’aamiyaan marka ay amaan tahay ee ardayda dugsiyada sare ku noqon karaan iskuulada. Fadlan ogow in marka ugu horaysa ee la go’aamiyo, qoysaska waan la soo socodsiin doonaa.
Sida lagu heli karo cuno lacag la’aan ah
Anagoo isticmaalayna deeq laga helay dawlada federalka ah, cuntooyinka bilaashka ah waa loo sii wadi doonaa dhammaan ardayda.
Adeega jidka qarkiisa wuu ka sii socon dhammaan iskuulada ilaa Jan. 15.
Maalinta Jan. 15, dhammaan goobaha waxay bixin doonaan afar casho cunooyinkood oo isku jira oo ah Jan. 15-18.
Laga bilaabo Jan. 19, adeega jidka qarkiisa waxaa laga heli karaa oo keliya dugsiyada sare. Waalidiinta ardayda ku jira fasalada 3-5 (ee weli ku jira waxbarashada durugsan ilaa Feb. 1) waxay aadi karaan dugsiyada sare kay doonaan si ay u qaataan cuntada ilaa intay ardadoodu kaga laabanayaan waxbarashada fasalada.
Laga bilaabo Feb. 1, dhammaan dugsiga sare waxay sii wadi doonaan qaadashada cuntada jidka qarkiisa ee ardayda dugsiyada sare.
Inta lagu jiro waxbarashada iskuulada la tegayo, ardaydu waxay cuntada ka cunayaan iskuulka. Waxay kaloo heli doonaan jimce kasta qado iyo quraac wada socda oo sabtida iyo axada ah. Haddaad rabto in lagaa saaro cuntada dhammaadka todobaadka fadlan soo buuxi foomkan please complete this form.
Sannadka soo socda ka waran?
Waxaa dhici kara in qaarkiin la yaaban yihiin qorshaha xanuunka ee sanad-dugsiyeedka 21-22. Fadlan ogow in dhammaan iskuulada dadweynaha Minnesota raacaan talooyinka ka yimaada waaxda waxbarashada Minnesota iyo hay’adaha caafimaadka dadweynaha wixii la xiriira cudurada faafa. Waxaan hubaal rajeynaynaa inaan awoodi doono in aan u shaqayno si caadiya sanadka dambe.
Sidii caadiga ahayd, waad ku mahadsan tihiin taageeradiina intii lagu jiray xiliyada adag ee sii kordhaya. Waxay rajeynayey in 2021 noqon doono bilowgii ku noqoshada caadiga, laakiin
weeradii usbuucii la soo dhaafay ee Capitol ka qaranka ayaa burburiyey riyooyinkaas. Fadlan kala hadal caruurtaada waxa dhacay. Haddaad u baahan tahay talooyin, isticmaal adeegyadan ka yimi National Association of School Psychologists.